Classic Inner City Hideaway - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLachlan
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uLachlan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu entle ebekwe kuluntu olunamagqabi anamasango kumphetho weRushcutters Bay kunye neSydney CBD. Le ndawo yokuzimela yesixeko enoxolo iphakanyiswe ngokukhuselekileyo kumgangatho ophezulu wesakhiwo sevenkile. Ukwamkela ubuninzi bokukhanya kwendalo, i-classic art deco apartment iza inefenitshala epheleleyo. Ikhitshi langoku eline-dishwasher, igumbi lokuhlambela elimangalisayo, indawo yokuhlamba yangaphakathi enewasha / isomisi, i-wifi ye-Intanethi, eyakhiweyo kwigumbi lokulala elikhulu, ifakwe kakuhle kuyo yonke indawo. Iluncedo kwaye ikufutshane kuyo yonke into.
Indawo yokuhlala kukuhamba okufutshane ukuya eKings Cross kunye nokumisa uloliwe omnye ukusuka kumbindi weSydney.
Kukho intabalala yeevenkile zekofu, iibhari, iindawo zokutyela, ii-pubs kunye neeklabhu indawo yokuphosa ilitye ukusuka kwigumbi lokuhlala, ukanti indlu ngokwayo izolile kwaye izolile ngazo zonke iiyure zemini.
4.62 · Izimvo eziyi-91
Indawo ikulungele kakhulu kuninzi okubonayo nokwenza. Isampulu yewayini yasekhaya kunye neebhiya, yenza ukhenketho lweBhasi yaseSydney Double Decker (yima kufutshane nekona), jonga iimarike zalapha ekhaya, hamba uye kubona ibhendi ephilayo / umboniso - konke kumgama omfutshane wokuhamba ukusuka kumnyango wangaphambili wendlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Lachlan
Ndihlala ngaphaya kwendlela ukusuka kwindlu kwaye ndiyafumaneka kwiindwendwe ukuba zinemibuzo okanye zinemiba.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-7798
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rushcutters Bay